तपाईंको B2B डाटा क्लीनिजिंग क्रडसोर्स गर्नुहोस् Martech Zone
तपाईंको B2B डाटा क्लीन्सि .लाई क्राउडसोर्स गर्नुहोस्
बुधबार, अप्रिल 6, 2011 शनिबार, अक्टोबर 29, 2011 Douglas Karr
गत हप्ता मैले मान्छेहरु संग एक ठूलो छलफल गरे नेटप्रोस्पेक्स, सेवा टूलसेटको रूपमा एक सफ्टवेयर जसले तपाईंलाई व्यवसाय सम्पर्क रेकर्डमा तपाईंको व्यवसाय बृद्धि गर्न र प्रमाणित गर्न अनुमति दिन्छ। प्रणाली धेरै धनी छ, पहिले नै २१ मिलियन प्रमाणित B21B सम्पर्कहरूमा डाटा एकत्रित गर्दै।
कहिलेकाँही नाम, ईमेल ठेगाना वा पार्टीको जानकारीको केहि अन्य अंश स collect्कलन गर्न यो सजिलो हुन्छ। जहाँसम्म, व्यक्तिहरू प्रत्येक केहि बर्ष औसतमा काम सार्छन्, त्यसैले B2B डाटाबेस प्राय: स्थिर हुन्छ। ईमेल अभिलेख ईमेल तपाइँको ईमेल वितरण मा एक प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्छ र तपाइँ ब्लक पनि हुन सक्छ। थप रूपमा, यसले तपाईंको बिक्री टोलीलाई मद्दत गर्दैन जब तपाईंको नेतृत्व आंशिक डाटाको साथ आउँदछ।
नेटप्रोस्पेक्स सिमलेस तपाईंको सीआरएमको साथ एकीकृत गर्दछ र चाँडै एक प्रस्ताव गर्दैछ एपीआई ताकि बाह्य प्रणालीहरू केवल सफा गर्न सक्छन् र स्वचालित रूपमा उनीहरूको डाटा बढाउन सक्दछन्। एक थप प्रोत्साहनको रूपमा, जब तपाइँ नेटप्रोस्पेक्समा नयाँ रेकर्डहरू अपलोड गर्नुहुन्छ, तपाइँलाई एक क्रेडिट प्रदान गरिएको छ ... किनकि तपाइँ भर्खर डेटाको प्रमाणिकरण गर्ने भीडको अंश बन्नुभयो! दुबै नयाँ कम्पनीहरूलाई सेवामा सामेल गराउन र ती ग्राहकहरूको लागत घटाउँदै राख्नको लागि यो ईन्जीनियस तरीका हो!
यहाँ छ कि कसरी नेटप्रोस्पेक्स कार्य गर्दछ:
प्रयोगकर्ताहरूले नयाँ सम्पर्कहरूको सट्टामा नेटप्रोस्पेक्स डेटाबेसमा सम्पर्कहरू थप्छन्। भीड-स्रोत द्वारा डाटा प्रमाणीकरण गरिएको छ र डाटाबेसको गुणवत्ता समयको साथ बनाएको छ कि छैन सुनिश्चित गर्न को लागी स्वामित्व प्रविधिको एक दायरा प्रयोग गरीन्छ।
नेटप्रोस्पेक्सको वेब-आधारित खोज उपकरणले सटीक लक्षित दर्शकहरूमा अझ बढी दृश्यता प्रदान गर्दछ, र प्रयोगकर्ताहरूलाई कार्य प्रकार्य, उद्योग, कम्पनी आकार, भौगोलिक स्थान, विशिष्ट कम्पनी, नाम, प्रविधि परिनियोजन, र अधिक सहित मापदण्ड लक्षित गरेर संभावनाहरू खण्ड गर्न अनुमति दिन्छ।
अन्तिम रेकर्ड सम्पर्क जानकारी, सामाजिक प्रोफाइल जानकारी, र मिति र स्कोर प्रदान गरिन्छ जुन सहीता र समय रेकर्ड प्रमाणित गरिएको थियो।
प्रणाली एकदम सस्तो (एक गुणवत्ता ग्यारेन्टीको साथ) प्रति रेकर्ड $ ०.0.75। मा सुरू हुन्छ। यदि तपाईले डाउनलोड क्रेडिटहरू समय भन्दा पहिले खरीद गर्नु भयो भने लागत उल्लेखनीय रूपमा कम गरिएको छ ... सम्पूर्ण तरिका १ मिलियन रेकर्डको लागि प्रति रेकर्ड १ c सेन्टमा। विगतमा डाटा सफा गर्ने सेवाहरू किन्नुहुने कसैको लागि ... यो एकदम मूल्य हो। नबिर्सनुहोस् तपाईले आफ्ना अपलोडहरूको लागि क्रेडिट पनि प्राप्त गर्नुभयो!
तपाईं नेटप्रोस्पेक्सको पनि उपयोग गर्न सक्नुहुनेछ खोजी क्षमताहरु:
तपाईं तिनीहरूमा जो लाग्छ कि यो जस्तो प्रणाली थोरै खराब हुन सक्छ: जब एक रेकर्ड नेटप्रोस्पेक्समा कारोबार हुन्छ, सम्पर्कलाई सूचित गरिन्छ र दिइएको छ अप्ट-आउट गर्ने मौका, र तिनीहरूको जानकारीलाई नेटप्रोस्पेक्स डाटाबेसबाट हटाउनुहोस्। यो अरू प्रणालीहरू बाट एक चरण अप हो जुन तपाईंको डाटालाई स regard्कलन र बिक्री गर्दै छन् कुनै महत्व बिना! थप रूपमा, नेटप्रोस्पेक्सले उनीहरूका ग्राहकहरूलाई ईमेलको लागि रेकर्डहरू प्रयोग गर्नु अघि क्यान-स्पाम अनुरूप हुन आवश्यक छ।
गुगल एनालिटिक्स: बहु खाता ट्र्याक गर्नुहोस् (नयाँ कोड)
फोरस्क्वायरमा के गलत छ?
त्यसोभए डग, यो विज्ञापन हो? किनकि तपाईंले यस लेखमा धेरै निन्दनीय झूटहरू सूचीबद्ध गर्नुभएको छ जुन महिमित विज्ञापन प्लेसमेन्ट बाहेक अरू केही देखिंदैन। ईमेलको वैधता प्रमाणीकरणको बारेमा अंश ... हो, यो सत्य होइन, किनभने मेरो ईमेल ठेगाना तिनीहरूको सूचीमा छ। यदि कसैले मलाई कल गरी "अरे, यदि हामीले तपाईंको ईमेल ठेगाना अरु व्यक्तिलाई बेच्न दियौं भने के तपाईलाई केही फरक पर्दैन" अनुमान के जवाफ दिनुहुन्छ?
मेरो ईमेल ठेगाना यस डेटाबेसमा अवतरण भयो र म यसलाई हटाउन कोसिस गर्दै नरकको माध्यमबाट छु। मँ "अप्ट आउट" नीति को बारे मा तपाइँको सानो टिप्पणी मन पराउछु जहाँ यी अविश्वसनीय उदार व्यक्तिहरु कल र सोध्छन् "मिस्टर। ग्राहक, हामीले तपाईको इ-मेल ठेगाना केहि डेडबीट रिटेलरबाट खरीद्यौं जसले निर्णय गर्यो कि ऊ तपाईको बिक्रीबाट नाफा मात्र कमाउँदैन, त्यसैले उसले तिमीलाई बेचे "किनकि म पक्का छु कि २१ करोड मानिस अपरिचित व्यक्तिद्वारा स्पाम हुन सहमत हुनेछन। केहि अजीब देखिन्छ, हैन? यो जान्नको लागि खुसीको कुरा यो हो कि मैले उनीहरूका केही ग्राहकहरूलाई नेटप्रोस्पेक्सको साथ धेरै बढ्तै उत्तेजित पारेको छु, त्यसैले म केवल आशा गर्न सक्छु कि उनीहरूले मेरो समस्याहरूको परिणाम स्वरूप केही व्यवसाय गुमाए।
यहाँ तल रेखा डग छ; अनियमित बकवास किन्नको लागि तपाइँ विज्ञापनहरू साथ ईमेल नगर्नुहोस्। तपाईले अपरिचित व्यक्तिलाई पनि प्रासंगिक बकवास खरीद गर्न पठाउनुहुन्न। यो एक असफल रणनीति हो जसले केहि गर्दैन तर सर्भरबाट तपाइँलाई कालोसूचीमा पुर्‍याउँछ र तपाइँको खुला र क्लिक दरहरूलाई हितकर ढु rock्गा जस्तो खस्याउँछ। ग्राहकहरू जुन तपाईं स्पाम ईमेल मार्फत सुरक्षित गर्न सक्नुहुनेछ, कलहरू र फ्याक्सहरू सबैभन्दा कम साधारण डिनोमिनेटर हो जब यो मुनाफाको कुरा आउँछ। यदि तपाईंको लक्ष्य व्यक्तिलाई घोटाला बनाउने हो भने, तिनीहरूलाई कडा र छिटो हिर्काउनुहोस् र रातमा अदृश्य पार्नुहोस्, त्यसोभए यो तपाईंको लागि प्रोग्राम हुन सक्छ! यदि तपाईंको लक्ष्य ग्राहकको वफादारी निर्माण गर्ने र विश्वास जगाउने हो भने, यो कार्यक्रम तपाईंको ताबूतमा कील हुनेछ। वफादार (बुद्धिमान) ग्राहकहरु स्प्यामरबाट खरीद गर्दैनन्।
के तपाईंले गर्नुभयो वा भन्नुभएन: "जब रेकर्ड नेटप्रोस्पेक्समा कारोबार हुन्छ, सम्पर्कलाई सूचित गरिन्छ र अप्ट-आउट गर्ने अवसर दिइन्छ, र उनीहरूको जानकारी नेटप्रोस्पेक्स डाटाबेसबाट हटाउँछ।"
अब मलाई यकिन लाग्दैन कि तपाईंले झुठलाई के ठान्नुहुन्छ तर जब तपाईं सत्य के हो भनेर केही भन्नहुन्छ भने म त्यो चीजलाई टाढाबाट कसरी सत्य बनाउने भनेर छक्क पार्छु। नेटप्रोस्पेक्सले मलाई कहिले पनि "मेरो अनुमति मागेको छैन" सम्पर्क गरेन।
जिम्मेवार ईमेल प्रयोगको लागि, मलाई तपाइँलाई जिम्मेवारीको बारेमा एक वा दुई चीज भन्न दिनुहोस्। मानिलिनुहोस् कि कोही उनीहरूको ईमेल ठेगानाको साथ होशियार छैनन् "अनुत्तरदायी" हो। एकछिनको लागि मानौं कि जो कोही स्प्याम कानून र स्प्याम प्रविधिहरूको बारेमा राम्ररी परिचित छन् उनीहरूको ईमेल ठेगानाको साथ अतिरिक्त सावधानी अपनाउँदैन ... त्यो "गैरजिम्मेवारपूर्ण" हो। मेरो जिम्मेवारी तब समाप्त हुन्छ जब नराम्रो संगठनहरूले मेरो ईमेल ठेगाना नाफाको लागि प्रयोग गर्छन् जब तिनीहरूले दावी गर्छन् कि तिनीहरूले त्यसो गर्दैनन्। मेरो जिम्मेवारी समाप्त हुन्छ जब कम्पनीहरूले ब्लगरहरूलाई उनीहरूको सेवाहरूको बारेमा राम्रा लेखहरू लेख्छन् ताकि उनीहरू दाबी गर्न सक्नेछन् कि तिनीहरू "फरक छन्।" तर म पक्का छु कि तपाइँलाई तपाइँको समीक्षाको लागि भुक्तान गरिएको थिएन, किनकि हामी सबैलाई थाहा छ कि ब्लगर्सले अनियमित कम्पनीहरूको लागि आफ्नो पैसा खर्च गर्न मन पराउँछन् ताकि उनीहरूको उत्पादनको बारेमा चम्किलो समीक्षा लेख्न सकून्। वास्तवमा, यस साइटमा तपाइँको लेखहरूको केवल एक संक्षिप्त सारांशले देखाउँदछ कि तपाइँ "लेख" को आडमा धेरै कम्पनी सामानहरू ह्याक गर्नुहुन्छ जस्तो देखिन्छ। यस्तो देखिन्छ कि हामी आज कसैलाई विश्वास गर्न सक्दैनौं, स्वतन्त्र विचारको अन्तिम गड्ढा पनि होईन।
जारी नाम कलिंगबाट सुरू गरौं। एक झूट भनेको "जालसाजी गर्ने अभिप्रायले धोका दिने अभिप्राय" हो। मँ नि: शुल्क जानकारी को लागी ब्लग प्रदान गर्दछ समाचार र उत्पादनहरु को बारे मा जानकारी प्रदान गर्न को लागी कम्पनीको मार्केटिंग को मद्दत को लागी मद्दत गर्दछ यदि म झूट बोल्छु भने कसरी मेरो कामको इनाम दिइन्छ? म कति जना पाठकहरू हुनेछु? म मेरो प्रतिष्ठा र मेरो व्यवसायलाई किन त्यस्तो जोखिममा राख्छु?
कृपया नेटप्रोस्पेक्स नीति पढ्नुहोस्:
"प्रयोगकर्ताहरूले नेटप्रोस्पेक्सबाट ई-मेल संचारहरू अप्ट आउट गर्न रोज्न सक्दछन् र स्पष्ट अप्ट-आउट निर्देशनहरू ई-मेल सन्देशहरूमा समावेश गर्दछन् वा हामीलाई १--1-888२826--4877 at मा कल गर्नुहोस्।"
तपाईंले तिनीहरूलाई कल गर्नुभयो?
मेरो ब्लग पोष्टले उही ठ्याक्कै प्रकृयाको रिपोर्ट गर्‍यो जुन उनीहरूले मलाई उनीहरूको प्रदर्शनमा वर्णन गरे। यदि तपाईं "नकारात्मक" व्यवसायसँग निराश हुनुहुन्छ जसले तपाईंको ईमेल साझेदारी गर्दछ वा यसलाई गलत प्रयोग गरेको छ, तिनीहरूलाई लैजानुहोस्! म गम्भीरतासाथ तपाईं चाहानुहुन्छ! यदि उनीहरूले तपाईले भनेको कुरा गरे भने, म त्यसलाई कुनै पनि हिसाबले मानेन। यदि तपाईंलाई लाग्छ कि उनीहरूले आफ्नो सेवाका सर्तहरू उल्ल .्घन गरेको छ भने, मुद्दा हाल्नुहोस्। यदि तिनीहरूले स्प्याम नियमहरू उल्ल .्घन गरे, रिपोर्ट गर्नुहोस्। म तिमीलाई सहयोग गर्न सक्दिन म तिनीहरूको लागि काम गर्दिन। मैले तिनीहरूलाई तपाईंको ईमेल ठेगाना थपेको छैन। मैले तपाईंलाई ईमेल पठाएको छैन।
यदि तपाइँ विश्वास गर्नुहुन्छ कि म एफसीसी नियमहरू उल्ल !्घन गर्दै छु र लेखहरूका लागि भुक्तान गरिरहेको छु र यसलाई प्रकट गरिरहेको छैन भने, मलाई खबर गर्नुहोस्! म तपाईंलाई निश्चित गर्न सक्छु कि मेरो पुस्तकहरू क्रमबद्ध छन्। मसँग एक महान दर्शक छ जसले मेरो कामको कदर गर्दछ र ब्लगले राम्रो गर्न जारी राख्दछ। मलाई तिम्रो सहयोग चाहिएको छैन। तपाईंको दयनीय ट्रोलिंग कतै लैजानुहोस्।
"जब रेकर्ड नेटप्रोस्पेक्समा कारोबार हुन्छ, सम्पर्कलाई सूचित गरिन्छ र अप्ट-आउट गर्ने अवसर दिइन्छ, र उनीहरूको जानकारी नेटप्रोस्पेक्स डेटाबेसबाट हटाउँछ।"
तपाईं यसलाई बेवास्ता गर्नुहुन्छ र म तपाईंलाई फेरि एक पटक सोध्न चाहन्छु, रेकर्डको लागि, यो हो वा यो तिनीहरूको नीति होईन? के तपाईंले यसलाई प्रमाणित गर्न कुनै प्रयास गर्नुभएको छ वा तपाईं केवल यसको लागि शब्द लिइरहनुभएको छ? मैले पहिले भनेझैं, तपाईंको ब्लगले विज्ञापन झैं पढ्छ, र जब तपाईं कम्पनीको गलत चित्रण पोस्ट गर्नुहुन्छ, निश्चित रूपमा अनुसरण गरिएको नीतिका साथ, तपाईं अचम्मको लागि बयानहरू प्रमाणित बिना नै किन तपाईं रिपोर्ट गर्नुहुन्छ भनेर सोच्न छोडिलो छु? यो एक हत्या संदिग्धको अन्तर्वार्ता लिने र उसलाई अपराध गरेको थियो कि भनेर सोध्नु जस्तै हो, त्यसपछि तथ्यलाई खोजीको रूपमा उत्तरको रूपमा रिपोर्ट गर्नु। धेरै नै कम्तिमा पनि तपाईं कठोर पत्रकारिताको लागि दोषी हुनुहुन्छ। तपाईं यो ट्रोलिंग कल; मैले यो सुधार गरें (र म यहाँ राम्रो छु) एउटा गलत सत्य।
र यदि म ट्रोल हुँ, तपाईं पहिलो नियम उल्ल .्घन गर्दै हुनुहुन्छ। ट्रोललाई नखोज्नुहोस्।